Mirayiridzo Kubva kuSemalt On Nzira yekugadzirisa Google Analytics Referral Spam
Chii chinonzi Referral Spam?
Mhinduro yakakodzera ndeye 'bots'. Izvo zvinyorwa zvinyorwa zvakanyorwa nemakodhi zvine chinangwa chekushandisa uye kuchinja webhu. Zvisinei, Artem Abgarian, Mutungamiri Mukuru weVatengi Vokubudirira Semalt , anotaura kuti kwete mabhodhi ose "anotyisa." Somuenzaniso, Google inoshandisa bots kuti iise webhu. Chero mamiriro ezvinhu, mabhu anotyisa anotsamwisa kwazvo muchiedza chekuti vanogona kuita basa rakadaro rakawanda munguva pfupi.
Mamwe mararamiro epa spam anoshanya iwe webhusaiti yako - prediksi jitu taruhan sepak bola. Vanogona kugadzira zvinyorwa zvenhema, kuisa nzvimbo yako kana kuita chimwe chinhu chakasiyana uye vanosiya mutsara, kuti iwe unogona kuchengeta. Izvi zvinotyisa sezvo zvingave zvinoparadza panzvimbo yako uye zvinogona kupedza kuchengeteka kwako.
Saka chii chinobuda kunze?
Nenzira yakanaka, Google inotsanangura kuti iri kuongorora mhinduro yenyika yose yebombi dze spam dzakawanikwa pane analytics.
Imwe nzira yekuita nayo ndeyokudhonza 'Channel Channel Knots Bots uye Arachnids' checkbox.
Kuti udzire zvakasara, iwe unofanirwa kuita maonero akasiyana nemugwagwa. Ita mugove wakapfurikidza, uye izvi zvichakupa mukana wekuona mashoko ako echokwadi necheji yakabatana pamwe chete.
Pari zvino kuti udzivise mabhoti anonyatsoshanyira nzvimbo yako, tsvaga "mafungiro" chaiwo. Semuenzaniso, enda kuboka revatariri> Innovation> System Area, uye iwe uchava nekwanisi kuona ISP vako vaenzi vako vanoshandisa paunoenda newebsite yako.
Chero zvazvingava, vanhu vasiri vashandisi vangave vachishandisa zvinhu zvakadai sezvenyeredzi yekodhi-ops uye Telecom 1. Iwe unogonawo kutarisa rundown kuitira kuti uone iyo inonyanya kushandiswa (nzvimbo yekuti 'Googlebot') isingasimudzi simba chero ripi zvaro muwebsite yako.
Panguva iyo ichangotora gander kune avo vanobhururuka nokukurumidza vagovaisa mumashoko ekutsvaga. Kana zviitiko zvakakosha, tibvunzei, uye isu tichakupa nzira yakanakisisa yekukubatsira.